UBaxter useqoke ukaputeni omusha weBafana | isiZulu
UBaxter useqoke ukaputeni omusha weBafana
UBaxter uchaza ngokungabizwa kukaSerero kuBafana
UBaxter usememezele isikwati seBafana esizobhekena neNigeria
I-SAFA izomethula NgoMsombuluko uBaxter
Cape Town – Umqeqeshi weqembu lesizwe lakuleli, uStuart Baxter, usekuqinisekisile ukuthi uThulani Hlatshwayo uyena osezogqoka ibhande lokuba ngukaputeni weBafana Bafana ngokugcwele.
Ngemuva kokuthi iSouth African Football Association (SAFA) yamemezela uBaxter njengomqeqeshi omusha weqembu lesizwe, omunye wemibuzo bekulokhu kungukuthi ‘ubani ozohola iqembu lesizwe?’.
Ngemuva kweminyaka emibili ekuBafana Bafana, lowo owayengumqeqeshi uShakes Mashaba washintshashintsha okaputeni beqembu nokwenze iningi labadlali baqokwa njengokaputeni.
“UHlatshwayo uzoba ngukaputeni weBafana Bafana,” kusho uBaxter esithangamini sabezindaba, njengoba ecashunwe kanjalo ekhasini likaTwitter leBafana.
OLUNYE UDABA: Ligqabukile igoda phakathi kweqembu eligijima ku-PSL nomqeqeshi
“Unawo wonke amava kakaputeni, ukudlala njalo, unesipiliyoni futhi uhola ngokuyisibonelo.
“Ibhande likakaputeni kumele lithathwe njengelibalulekile, hhayi [ukuthi] lishintshwashintshwe liphinde lidluliswe kubadlali abangu-16. Ngakho lokhu kungokugcwele.”
UHlatshwayo uzohola iNingizimu Afrika uma isibhekene neNigeria emdlalweni wokuhlungela imidlalo yomqhudelwano we-Africa Cup of Nations (AFCON) eGodswill Akpabio International Stadium ngoMgqibelo mhlaka-10 June.
Lo mdlalo uzoqala ngo-18:00 (ngokwesikhathi saseNingizimu Afrika).
ISIKWADI SEBAFANA BAFANA:
“Kumele abuyele ekhaya futhi singathanda ukubona ibhola angalidlala eselekelelana nabadlalai abafana noXolani Mlambo noMusa Nyatama."